I-VILLA1wagen japangardn ethule+ikhishi - I-Airbnb
I-VILLA1wagen japangardn ethule+ikhishi
555 okushiwo abanye
Ikamelo e-i-villa ibungazwe ngu-Barbara
Ekamelweni lasekhishini ungajabulela umuzwa wokuphenduka kwekhulu leminyaka le-villa yethu eyakhiwe ngo-1902 endaweni ethule, ephephile futhi eluhlaza... eduze nesikhungo sedolobha esingokomlando (ibhasi 12 min, 25 min ngezinyawo, Indawo yokudlela Eder 8 min) ngakolunye uhlangothi phansi kwe-Gaisberg enezindlela eziningi zokuhamba izintaba. I-ambience enefenisha ye-Biedermeier nokubuka ingadi yase-Japan....ikhishi elihlome ngokuphelele, elinesitofu kanye nokufinyelela efrijini, igedlela, i-toaster, umshini wekhofi kanye neshawa elihle lemabula.
Sikufisela ukwamukela ngenhliziyo yonke!
Ku-VILLA yakho yangasese ka-1902 ezansi kwentaba yaseGaisberg kwenye yezindawo zokuhlala ezinhle kakhulu eSalzburg.
Okuhlaza - kuthule- kuphephile futhi kuseduze nesikhungo somlando ngokuhamba kwamaminithi angu-20-30 noma amaminithi angu-12 ngebhasi inombolo 6 (kusuka esiteshini ukuya kithi imizuzu engu-19 kuphela!) Ibhasi elihamba yonke i-10 min.
I-Historical Flair - induduzo yanamuhla!
Sinamagumbi okulala angu-4 abantu abangafika kwabayi-8. ( Bheka amanye amagumbi ngapha kwesokudla , phansi) Ubhukha igumbi eliboniswe phezulu kulolu hlangothi! Umbhede wamahhala uma kudingeka.
Njengomuntu ongaphakathi ngingakusiza ngolwazi lwami lwendawo ukuze ujabulele iholide elihle!
Igumbi lethu likanokusho litholakala ezitebhisini ezimbili phezulu ne-OWN yokugezela yemabula, i-WC ehlukene kanye ne-balcony enokubukwa okumangalisayo!
AMAGUMBI angu-3 atholakala engadini phansi , elinye linekhishi lalo :
Konke okusha okunethezeka kwemabula eshawa kanye nendlu yangasese (kwabiwe nabanye)
AMENITIES awo wonke amagumbi
*amakamelo okulala aphindwe kabili, ayatholakala futhi umuntu oyedwa
* Ifenisha yasendulo, imidwebo yasekuqaleni: Biedermeier, Art Nouveau, ekuqaleni kwekhulu leminyaka
* I-inthanethi yamahhala, i-WLAN / i-WIFI
* isiqandisi, iketela, itoaster, umshini wekhofi
* Buka engadini, ehlezi engadini
* Amathawula nelineni lombhede
* ISIKRISTU: Ithosi, nohlobo lwesibili lwesinkwa, ujamu ( kwesinye isikhathi owenziwe ekhaya ... ) uju netiye elikhethiwe nekhofi sekulungile ukuze uzilungiselele wena isidlo sasekuseni .
* Itiye nekhofi ngendlela ofuna ngayo ...
UKUPAKA KWAMAHHALA kuyatholakala emgwaqeni , okonga imali eningi e Salzburg .
* Izinga elihle kakhulu lamanzi okuphuza empompini
*Indlu engabhemi endaweni ethule yokuhlala
* Njengoba kudingeka: ukupholisha izicathulo, ikhithi yokuthunga, insimbi, njll.
*Intela yendawo ifakiwe
Ube nesikhathi esimnandi eSalzburg enhle!
* Isiteshi sikaloliwe imizuzu engu-19 ngebhasi
* I-AIRPORT imizuzu engama-20 ngemoto, ngebhasi imizuzu engama-35
*Izicabha ezi-5 phansi kunesitolo sokubhaka, esibhekene nendawo yokudlela enhle enebha
* Imizuzu emi-3 ngaphansi kwesuphamakethe
* Ikhemisi, ikhefi, izindawo zokudlela, ibhange kanye ne-PARK enhle nemizila kungaphakathi kwebanga lokuhamba.
Kunamathuba EZEMIDLALO kuleli paki: ithenisi yetafula, ibhola likanobhutshuzwayo, ukugijima, ibasketball kanye nenkundla yokudlala enhle. Kukhona ichibi lokubhukuda elingaphandle lomphakathi kanye ne-ice skating phakathi nemizuzu engu-15.
EDOLOBHENI ELIDALA: amakhefi amaningi anomoya wase-Austrian, i-disco, zonke izinhlobo zezindawo zokudlela, ichibi langaphakathi lomphakathi
IZIKHANGISO: I-Mirabell Palace, Indawo Yokuzalwa ka-Mozart, Ihholo Lomkhosi, I-Sound of Music Tour, umkhumbi we-Salzach
IMISEBENZI: amakhonsathi, amamuvi, Museum of Modern Art, Rupertinum Museum of Natural History, Tennis.
Ukuthenga: Euro Park, Old Town
Eduze kwaseSalzburg amachibi amaningi amahle, ukuhamba ngomkhumbi, izindawo zokungcebeleka ze-ski ezimbalwa kanye nezindawo ezishisayo zasentwasahlobo - zifinyeleleka ngemizuzu engama-20-45!
Intela yesivakashi ifakiwe.
Sifisela isikhathi esihle e-Salzburg emangalisayo!
4.68 out of 5 stars from 555 reviews
4.68 · 555 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-555
Mina nomndeni wami, sihlala e-villa eyodwa futhi sijabulela indawo ethule futhi eduze nedolobha! Ngakho-ke ngingakwazi ukusiza lapho kudingeka, ngigcine ingxoxo emnandi futhi nginikeze ulwazi, ngesikhathi esifanayo ngihlala ngiyimfihlo yesivakashi ngasinye.
Mina nomndeni wami, sihlala e-villa eyodwa futhi sijabulela indawo ethule futhi eduze nedolobha! Ngakho-ke ngingakwazi ukusiza lapho kudingeka, ngigcine ingxoxo emnandi futhi ngini…
Inombolo yepholisi: 50101-000178-2020
Ngena: 13:00 - 21:00
Hlola ezinye izinketho ezise- Salzburg namaphethelo